« 100 startups.co »: homena 2.000 euros izay tetikasa voafidy | NewsMada
« 100 startups.co »: homena 2.000 euros izay tetikasa voafidy
Hambaran’ny « 100 startups.co » ny 5 jolay ho avy izao, ao amin’ny Worskhop Idea Center, Ankorondrano, amin’ny 7 ora hariva, ny valin’ny fifaninanana famaranana famoronana tetikasa tsara indrindra, ataon’izay tanora nandray anjara, ka miteraka asa. Iaraha-mahalala fa olana lehibe io tsy fahampian’ny tolotrasa io, miantraika amina tanora an’hetsiny.
Ny volana aogositra 2017 no teraka ny « 100 startups.co » nahita hevitra hangataka fanampiana amin’ireo mpiray tanindrazana monina any ivelany, hananganana orinasa eto amin’ny Nosy. Tetikasa 100 noheverina hitondra fampandrosoana amin’izany, ary vola 200.000 euros no katsahina. Hatramin’izao aloha, 5202,41 euros ihany ny azo. Noho izany, mbola vitsy ny ho voatosika, homena 2.000 euros isaky ny tetikasa roa izay ho voafidy amin’ireo dimy hanao famaranana.
Koa amin’io 5 jolay io, samy hanohana ny heviny ireo voasivana. Misy amin’izy ireo haneho ny heviny ho famahana ny olana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra ; ny hafa manana tetikasa fanamainana voankazo; ao ny manan-kevitra mampifandray ny tanora sy ny orinasa.
“20 ny tetikasa henjehina hotohanana hatramin’ny 2019, ary mitohy izay fanohanana izay mandritra ny dimy taona », hoy Rakotomahanina Ranja Chrys, avy ao amin’ny « 100startups.co ». Isaky ny volana novambra, misokatra ny fifaninanana ary manomboka ny volana janoary hatramin’ny febroary ny fanaovana sivana ireo izay hanolo-kevitra. Koa miantso ny mpanohana sy ny mpiara-miombon’antoka ny “100 startups.co” mba hanampy. Tanjona ny hamoronana asa ho fanampiana ny tanora, ho fanentanana azy ireo, indrindra hanan-kevitra hitodika ho amin’ny fandraharahana. Azo atao tsara, araka ny lalàna, ny manara-maso ny fampiasam-bola voaangona.